Yaa'ii gamtichaarratti fakkiin biyyaa akka hinbadne akeekuu qaba
Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaafi Itoophiyaa ta'uurra darbee teessoo Gamtaa Afrikaa ta'uusheetiin walga'iiwwaniifi yaa'iiwwan idil addunyaafi ardittii addaddaa ni adeemsiifti. Kanneen keessaa Yaa'iin Gamtaa Afrikaa ji'a Amajjii keessa adeemsifamu isa guddaafi ijoodha.
Yaa'iin Afrikaa 30ffaanis torbee kanaa eegalee adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, Wiixata dhufu xumurama jedhamee eegama. Yaa'iicharrattis ambaasaaddaroonni, ministeeroonni, geenneewwaniifi gaggeessitoonni sagantaa ba'eefiin walga'ii kan adeemsifatan yoo ta'u, kan gaggeessitootaa Dilbataafi Wiixata dhufu adeemsifama. Yaa'iidhuma kanarratti hirmaachuuf keessummoonni kumaa ol ta'an Finfinnee seenaniiru.
Magaalattiinis aadaa keessummaa simachuu ittiin beekamtuun akkuma durii keessummootashee mufii tokko malee keessummeessuuf dursitee qophii barbaachisu hunda taasifteetti. Keessummoonni dhufan gama bakka bultii, tajaajila geejibaa, meeshaalee aadaa bitachuufi kan kana fakkaataniin tajaajila ga'aa itti gammadan akka argataniifis koreeleen Ministeera Aadaafi Turizimiitiin ijaaramanii hojjechurratti argamu.
Korichi qaamooleen tajaajila kennan kunneen haala kanatti fayyadamuun garmalee gatii akka hindaballeefi qulqullinni tajaajila isaanii baay'ee gadi akka hinbuuneef kan to'atudha. Kanaafuu abbootii qabeenyaa waliin ta'uun haala danda'ameen to'annoofi hordooffii taasisaa jira.
Haa ta'u malee abbootiin qabeenyaa muraasni waa'een fakkii gaarii biyyaa hommaa itti hinfakkaanneefi yeroo gabaabaatti fayyadamuun duroomuu barbaadan carraa kanatti fayyadamuun tajaajila kennaniirratti gatii garmalee dabaluudhaan keessummoonni akka mufatan taasisaa turaniiru, ammas taasisaa jiru.
Abbootiin qabeenyaa kunnenis faddaaloota waliin hidhata kan qaban yoo ta'u, isaaniifis komishinii (gatii isaan keessumaa ittiin fidan) akka isaan yaadaniif yeroo addaddaatti yaadni ni ka'a. Kana malees konkolaachistoonni konkolaataa mootummaa keessummoota akka deeddeebisaniif ramadaman tokko tokkos afaanuma baasanii qarshii akka gaafataniifi yommuu keessummoonni kennaa addaddaa biyyisaanii ittiin beekamtu kennaniif harkaa fuudhanii akka darbatan ni ibsama.
Dhimmoonni kunneeniifi kanneen biroo kan hamiidhaan ka'an qofa osoo hintaane koreeleen keessoommeessitoonni yeroo yerootti ijaaramaniis kan beekaniifi jiraachuusaa kan amananiidha. Gochaan akkanaa kunneen garuu tasumaa aadaa biyyattii kan hinibsineefi fakkii gaarii biyyattiin kanaan dura qabdu kan balleessuudha. Xiyyeeffannaan itti kennamee furamuudhaa yoo baatemmoo biyyattiin fakkii gaarii qabdu cinaatti faayidaa hawwata turistiirraa argattus kan dadhabsiisuudha.
Kanaafuu gochichi hundee gdadi fageeffatee miidhaa jedhame utuu hinqaqqabsiisiin dura gamanumaa hojiin bal'aa hojjetamuu qaba. Koreeleen keessummeessitootaa yommuu yaa'iin jala ga'u qofa hundeeffamanii kan socho'an osoo hintaane durasniidhuma hojii dhaabbii ta'e hojjechuutu irraa eegama. Abbootii qabeenyaa qofa waliin osoo hintaane keessummoota waliin illee hariiroo barbaachisu uumuun garmalee akka isaan hinqisaasneef hojjechuun dirqama isaanii ta'uu qaba.
Walumaagalatti, gochoonni akkanaa faayidaasaaniirra miidhaan isaanii waan caaluuf koreelee dhaabbatan cinaa lammiileefi miidiyaaleenis ittigaafatamummaadhaan dhimmicharratti hojjechuu qabu.
Torban kana/This_Week 12399
Guyyaa mara/All_Days 1821819